Baro sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo barnaamijyada Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Waxaa jira afar maalmood oo keliya ilaa Apple Watch Ka soo deg Isbaanish waana taas sababta aan u dooneyno inaan ugu hibeyno maqaal ku saabsan baloogkeena oo ku tusaya tallaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u soo dejiso codsiyada ka dibna ugu dhejiso saacaddaada. Marka laga hadlayo iPhone ama iPad, waxaan leenahay codsi la yiraahdo App Store taas oo aan ku raadin karno codsiyada oo aan ku dhejin karno haddii dhibaatooyin badan.
Si kastaba ha noqotee, Apple Watch uma shaqeeyo si isku mid ah waxaadna u baahan tahay iPhone si aad u awoodo inaad kala soo baxdo codsiyada isla markaana aad ku rakibto. Waa inaan kala soo baxno barnaamijyada Apple Watch barnaamijka aan ku dhex jirno our iPhone iyo in ka yimid bilaabay ee iOS 8.3, barnaamijka Apple Watch. Codsigan waa meesha ay tahay inaan ka soo galno daqiiqadda aan dooneyno inaan bilowno isticmaalka saacadeena, maadaama ay mas'uul ka tahay isku xirka iPhone-keena.
Waxay ku dhowdahay waqtigii aad si fiican u ogtahay waxa habka soo degsashada codsiyada iyo ku rakibidda Apple Watch-ku ay u eg yihiin. Jimcahaani wuxuu noqon doonaa maalmahaas kumanaan isticmaale ah ay heli doonaan saacadooda casriga ah oo ay bilaabi doonaan adeegsiga. Si tan loo sameeyo, waa inay ku cadaadaan talaabooyinka ay tahay inay raacaan si ay saacadooda ugu diyaar garoobaan sida ugu dhakhsaha badan. Aynu ku bilowno casharkaan adigoo sharraxaya waxa ay tahay inaad sameyso si aad uga soo degsato barnaamijyada App Store.
1 Sida looga soo degsado barnaamijyada Apple Watch
2 Sida loo rakibo barnaamijyada Apple Watch
Sida looga soo degsado barnaamijyada Apple Watch
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso waa furitaanka arjiga Apple Watch on your iPhone.
Hadda waa inaad gujisaa qaybta "App Store".
Ka hel arjiga aad ka rabto wax ka badan 6000 oo horeba loo heli karay. Maskaxda ku hay inaad raadsan karto codsiyada adoo gujinaya "Raadi" ama "Baadh" ama "Featured" haddii aan dooneyno inaan soo helno barnaamijyo cusub.
Si aad u soo degsato arjiga guji "Hel" ama "Iibso" haddii la bixiyo.
Marka codsiyada la soo dejiyo iPhone-keena, waa inaan ku rakibnaa Apple Watch. Waqtigaan la joogo, codsiyada smartwatch ee Apple waxay kuxiranyihiin dhigooda iphone, taasi waa, hadaad soo degsato barnaamijka Telegram ee Apple Watch, barnaamijka Telegram ee iphone si otomaatig ah ayaa loogala soo bixi doonaa maadaama ay tahay halka shaqada oo dhan lagu qabto iyo barnaamijka Apple Watch. si fudud ayaa loo daryeelaa muujinta natiijooyinka. Laga bilaabo dayrta markii la sii daayo watchOS 2 waxaa horey u jiri doona codsiyo asal ah wax walbana way isbeddeli doonaan.
Sida loo rakibo barnaamijyada Apple Watch
Ku fur barnaamijka Apple Watch taleefankaaga iPhone-ka.
Guji qaybta "Saacaddayda".
Liiska codsiyada waa inaan raadinaa midka aan xiiseyneyno inaan ku rakibno Apple Watch, dhagsii oo sii si aad u rakibto.
Markaas dhaqaajiso ikhtiyaarka "Ku muuji abka Apple Watch".
Codsiga ayaa si otomaatig ah ula shaqeyn doona saacadeena codsiyada waxay ka muuqan doonaan Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Baro sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo barnaamijyada Apple Watch-kaaga
MAXAY UGU BAAHAN YAHAY APPS IN LOOGU TALAGALAY IOS, OO KA MUUQDA APPS DUKAANKA OO AAN KA SOO DI KI KARI KARO IPHONE-KA, HA IGUGU DHEHDO IN AAD KA DUUBATO TODOBAADKA WATCH 4?
Ku jawaab CARLOS TEVAL
Muxuu Taylor Swift ka yiri Apple Music si Apple dib ugu noqoto
Cusboonaysiinta cusub ee darawalada muraayadaha iyo daabacayaasha HP, Epson laga bilaabo OS X 10.7 Libaax wixii ka dambeeya